दीर्घ कोभिड : के छन् लक्षण ? कसलाई हुन्छ बढी जोखिम ? – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक १ गते १०:२४
काठमाडाैंकी लाक्पा शेर्पा भर्‍याङ उक्लँदा हिजोआज फतक्कै गल्न थालेकी छन्। कति पटक त दुई खुड्किलो उक्लिएपछि थचक्क बसेको सुनाउँछिन् उनी।
डाक्टर शेरबहादुर पुनले शेर्पाजस्ता धेरै बिरामी हेरेका छन्। एक जना बिरामीले उनीसँग भनेका थिए- ‘मेरो अङ्गभङ्ग भएको छैन। हेर्दा ठिक देखिन्छु। खाना खान्छु, हिँड्छु तर भित्रभित्रै मलाई निकै गाह्रो भएको छ। सामान्य जीवन जिउनै सकेको छैन।’कोही शारीरिक समस्या लिएर आउँछन्। कोही मानसिक रूपमा गलेर। कोभिड-१९ निको भएपछि पनि केही बिरामीको स्वास्थ्यमा निरन्तर वा केहीमा तीनदेखि चार सातापछि समस्या देखिएको छ। यस अवस्थालाई ‘लङ’ अर्थात दीर्घ कोभिड भन्ने गरिएको छ।
‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट सङ्क्रमणमुक्त भएपछि पनि केही समयसम्म मानिसहरूमा सङ्क्रमणको लक्षण एवं अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने त्यो दीर्घ कोभिड हो,’ डाक्टर पुनले भने,’ती समस्या शारीरिक एवं मानसिक दुवै खालका हुन सक्छन्। र, निरन्तर लामो समयसम्म सताउन सक्छ।’
दीर्घ कोभिडबारे अधिकांशलाई थाहा नभएका कारण प्राय मानिस आफ्नो शरीरमा देखिएका र महसुस भएका परिवर्तनसँग डराएको बताउँछन् उनी।
नेपालमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सङ्क्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो। त्यससँगै दीर्घ कोभिडको समस्या पनि व्यापक बनेको बताउँछन् त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बम।
उनी अस्पतालको कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिका ‘फोकल पर्सन’हुन्।
डाक्टर बमका अनुसार गत जेठको पहिलो र तेस्रो साताबिचमा शिक्षण अस्पतालमा ३ सय ७८ कोरोना सङ्क्रमित उपचारका लागि भर्ना भए।
मौसम परिवर्तनसँगै कोभिड-१९ सङ्क्रमणमुक्त भएका बिरामीहरूमा ज्वरो आउने, रुघा र खोकी लाग्नेजस्ता समस्या बल्झिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
अधिकांशले अत्यधिक थकान, शरीर तात्ने, जोर्नी दुख्ने, रिङटा लाग्ने, अरुचि, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ र कपाल झर्ने समस्याबारे बताइरहेका छन्।धेरैले मुटु ढुकढुक हुने, निद्रा नलाग्ने, डर र तनाव बढेको सुनाएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीकाबीच कोभिड बाहेकका बिरामीको ‘बेहाल’ डाक्टर बमका अनुसार सङ्क्रमण हुँदा आइसियु र भेन्टिलेटरबाट घर फर्किएका केही बिरामीहरूको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पुनः घटेको छ।
श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका बिरामीहरू मध्ये केहीलाई ‘हाइ फ्लो अक्सिजन’को सहायतामा उपचार गराइरहेको बमले बताए।
साउन दोस्रो साता यता लङ कोभिडका कारण शिक्षण अस्पतालमा मात्रै ३ जना बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ।
सङ्क्रमणमुक्त भएर घर गएका उनीहरूमा पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल आएका थिए।
सरकारी अस्पतालमा मात्र नभई निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि लङ कोभिडका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको बताउँछिन् पल्मनरी एन्ड क्रिटिकल केयर विज्ञ डा। रक्षा पाण्डे।
सङ्क्रमण हुँदा रगतका नलीहरूमा रगत ढिक्का बनेर जम्नुले केही बिरामीको मुटुमा पनि असर परेको बताइन्। त्यस्तै केही बिरामीहरूको मांसपेशी निकै कमजोर भएको जानकारी दिइन्।
‘फोक्सोको दाग मुटुको समस्याका कारण हो या मांसपेशी कमजोर भएर हो? भन्ने कुरा पहिचान गर्न अति आवश्यक छ। त्यसपछि उपचार र चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
अस्पतालबाट सन्चो भएर फर्किएकाहरूमा त समस्या देखिएको छ नै। साथै घरमै एकान्तवासमा बसेका र सङ्क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी नभएकाहरूमा पनि दीर्घ कोभिडको लक्षणहरू देखिएको डा। पाण्डेले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमुक्त भएका बिरामीहरूमा मल्टिसिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रम (एमएसआइसी) देखिएको छ।
पहिले बालबालिकामा मात्र देखिएको यस रोग हाल वयस्कमा पनि पहिचान भएको उनी बताउँछिन्। ‘यस रोगका लक्षणहरू ढिला देखिन्छन् तर पहिचान हुनुभन्दा अगाडि देखि नै शरीरको विभिन्न अङ्गहरू सुन्निन्छन् र असर पार्छ’, डा. पाण्डेले भनिन्।
दीर्घ कोभिड भएका कैयौँ मानिसहरूमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिएको शिक्षण अस्पतालका मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोजप्रसाद ओझाले बताए।
उनका अनुसार अस्पतालको ओपीडी वा आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीहरूमा डिप्रेसन (अवसाद), एङ्जाइटी (चिन्ता) र अनिद्राको लक्षणहरू देखिएका छन्।
डिप्रेसनको लक्षण देखिएका बिरामीहरूमा जाँगर र खुसी कम भएको, कुनै विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, कुराहरू बिर्सने समस्या देखिएको छ।
अधिक पसिना बग्ने, डर र चिन्ता बढ्ने, मुटुको गति बढ्नेजस्ता एङ्जाइटीका लक्षणहरू पनि कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका बिरामीहरूमा देखिएको छ।
त्यस्तै धेरैमा अनिद्रा र छटपटी पनि देखिएको डा. ओझाले जानकारी दिए। डाक्टरका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अवस्था हरेक व्यक्तिपिच्छे फरक देखिएको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीयता ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका, आफ्नो आफन्त वा साथीभाइ गुमाएका, बेरोजगार भएकाहरूलाई मानसिक रूपमा धेरै गाह्रो भएको देखिएको छ।
सङ्क्रमित वा सङ्क्रमणको त्रास भएकाहरुमा विभिन्न मानसिक विचलनको समस्या थपिएको छ।
‘जटिल परिस्थितिमा शरीरले देखाएको प्रतिक्रिया हुन् यी समस्या। त्यसैले आत्तिनु पर्दैनू, डा. ओझाले भने,’अवस्था प्रतिकुल रहेसम्म यस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यतिन्जेल हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुमा जोड दिन आवश्यक छ।’